Sidina vaovao mankany Las Vegas avy any San Jose, Boston, Orlando ary Fort Lauderdale amin'ny United Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina vaovao mankany Las Vegas avy any San Jose, Boston, Orlando ary Fort Lauderdale amin'ny United Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fivoriana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Sidina vaovao mankany Las Vegas avy any San Jose, Boston, Orlando ary Fort Lauderdale amin'ny United Airlines.
Ny United Airlines dia hanidina sidina 81 mankany Las Vegas mandritra ny andro fahatongavan'ny 3-4 Janoary, ary sidina 109 amin'ny andro fiaingana amin'ny 8-10 Janoary.
Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpanjifan'ny orinasa United, saika ny 20% no nilaza fa manantena ny fitsangatsanganana any amin'ny fivoriana ary ny fihaonambe dia hihoatra ny haavon'ny pre-pandemic amin'ny 2022.
Teo anelanelan'ny 27 Oktobra sy 9 Novambra, niakatra 2022% ny fikarohana tao amin'ny tranokala United momba ny sidina mankany Las Vegas nandritra ny CES 70 raha oharina tamin'ny fe-potoana roa herinandro teo aloha.
United Airlines dia manampy eo amin'ny 80% amin'ny fahaiza-manaony ho an'ny CES tamin'ny taona 2020, mampiseho fa ny fitsangatsanganana ara-barotra dia miverina.
Ho setrin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpanjifany orinasa sy ny fiakaran'ny fangatahana, United Airlines dia manitatra ny fandaharam-potoanany mba hanamora ny fanatrehan'ny mpanatrika ny CES 2022 amin'ny fampisehoana mivantana Las Vegas. Ny zotram-piaramanidina dia manampy sidina mivantana 14 vaovao amin'ny fiandohan'ny volana Janoary eo anelanelan'i Las Vegas sy San Jose, Calif., Boston, Fort Lauderdale, ary Orlando, ary manampy sidina 30 avy amin'ny seranam-piaramanidina misy azy any San Francisco, Los Angeles, New York/Newark. , ary Washington DC/Dulles. Izany dia maneho ny fisondrotry ny fahafaha-manao 37% raha oharina amin'ny fandaharam-potoanany tamin'ny Janoary ho any Las Vegas.
"Ny fiverenan'ny fihaonambe sy hetsika manokana dia famantarana tena tsara amin'ny fanarenana ny areti-mifindra, ary i United dia manana toerana manokana mba hahazoana tombony amin'ny fitomboan'ny fangatahana," hoy i Ankit Gupta, filoha lefitry ny Domestic Planning sy United Express. "Ampianay eo amin'ny 80% amin'ny fahafaha-manao natao ho an'ny CES tamin'ny taona 2020 izahay, mampiseho fa ny fitsangatsanganana ara-barotra dia mihemotra ary ny mpanjifanay dia maniry ny hihaona amin'ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa."
Eo anelanelan'ny 27 oktobra sy 9 novambra, mandeha ny fikarohana United Airlines tranonkala ho an'ny sidina mankany Las Vegas Nandritra ny CES 2022 dia niakatra 70% raha oharina tamin'ny fe-potoana roa herinandro teo aloha. Ary araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny mpanjifan'ny orinasan'i United, saika ny 20% no nilaza fa manantena ny fitsangatsanganana any amin'ny fivoriana ary ny fihaonambe dia hihoatra ny haavon'ny pre-pandemic amin'ny 2022.
United Airlines hanidina sidina 81 ho any Las Vegas mandritra ny andro fahatongavan'ny 3-4 Janoary, ary sidina 109 amin'ny andro fiaingana amin'ny 8-10 Janoary.
Ny sidina vaovao dia ahitana:
Sidina mivantana 8 avy any San Jose, Kalifornia
Sidina mivantana 6 avy any Fort Lauderdale, Boston ary Orlando
Sidina fanampiny 15 avy any San Francisco, ary sidina 9 amin'ny fiaramanidina lehibe kokoa
Sidina fanampiny 8 avy any Los Angeles, ary sidina 4 amin'ny fiaramanidina lehibe kokoa
Sidina fanampiny 5 avy any Washington DC/Dulles
Sidina fanampiny 2 avy any New York/Newark